Jaona 1 :
14 Ary ny Teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika; ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra miendrika ho an'ny Lahitokana avy tamin'ny Ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana.
15 Jaona nanambara Azy ka niantso hoe: Izy Ilay nolazaiko hoe: Izay avy ao aoriako dia efa tonga eo alohako, stria talohako Izy.
17 Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy; fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy.
18 Tsy nisy nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana; fa ny Zanakalahy Tokana, Izay ao an-tratran'ny Ray, Izy no nanambara Azy. AMEN!
Dia mbola ho ampitomboina ho aminareo mandrakariva anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andrimanitra Ray sy i Jesoa Kristy Tompontsika. AMEN.
Mbola mankalaza ny nahaterahan’i Jesoa Kristy isika ry havana ary amintsika kristianina ny fety tahak’izao dia ny fanavaozana ny fanahy mba ho any amin’ny fanantonana ny Tompo sy ny fibebahana fa tsy fety ho an’ny nofo tahaka ny fanaon’izao tontolo izao akory.
I Jaona ry havana dia apostolin’ny fitiavana no fiantson’ny apostoly namany azy sady tian’i Jesoa ko aizy. Ny filazantsara izay nosoratany dia manambara FITIAVANA hatrany, izany hoe filazantsara ny FITIAVANA.
Raha ity filazantsara an’i Jaona ity ry havana no jerena dia ny fanambarana an’i Jesoa Kristy no tantarainy eto.
1 Ny momba an’i Jesoa Kristy
2 ny zavatra netin’i Jesoa Kristy teto an-tany
Raha ny momba an’i Jesoa Kristy ry havana no hotanisana eto dia maro tokoa izany ary tsy ary ho voatanisa eto avokoa.
Fa ny momban’i Jesoa Kristy izay voalaza eto amin’ity Filazantsara ity no ho resahantsika.
Raha ny voalaza eto dia i Jesoa Kristy dia lahitokan’Andrimanitra.TENY TONGA NOFO ary efa nisy hatrizay.
TENY TONGA NOFO Izy satria efa ela no nampanantenain’Andriamanitra antsika ny fihaviany. Isaia mpaminany dia manambara izany ao @ toko faha 7, and 14: “14 Ary noho izany dia ny Tompo no hanome famantarana ho anareo: Indro, hanan'anaka ny virijina* ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataony hoe Imanoela**. [*Na: zazavavy][**Na: Imanoela = Amintsika Andriamanitra]
Sy ao @ 9:” 5 Fa Zaza no teraka ho antsika, Zazalahy no omena antsika; Ary ny fanapahana dia eo an-tsorony, ary ny anarany atao hoe Mahagaga, Mpanolo-tsaina*, Andriamanitra Mahery, Rain'ny mandrakizay Andrian'ny fiadanana.[Na: mpanolo-tsaina mahagaga]”
Ary satria Andrimanitra ry havana dia mitana mandrakariva ny teny fikasany dia tanteraka tokoa izany teniny izany ka terka ho antsika i Jesoa Kristy.
I Jesoa Kristy dia tonga olona tahaka antsika izay nofo sy ra mba ahafahany maka ny fontsika sy miray petsapetsa amintsika amin’ny fiainanantsika.
I Jesoa Kristy ry havana dia Zanak’Andrimanitra, Andriamanitra izany ary Andrimanitra dia Fanahy, izay tsy hitantsika olombelona maso.
Kanefa mba hahamora ny fifandraisany amintsika dia tonga olona i Jesoa Kristy. Ka naka nofo tamin’i Maria virjiny Izy hahatanterahiny izany fikasana tsara izany.
Ry havana, Andriamanitra hoy isika i Jesoa Kristy teo nefa dia nanaiky ho tonga nofo ary tonga tety an-tany.
Ny dikan’izany ry havana, dia Andrimanitra dia Fitiavana sy fanentre-tena.
Tsy tonga tety an-tany Izy raha tsy ny fitiavany no nitondra Azy tety.
Ary raha ny voninahitra ananany dia tsy tonga tety i Jesoa Kristy fa Andrimanitra feno fanetre-tena Izy ry havana.
Jereo anie, tranon’omby kely no mba nofidiany ho trano niterahany, fanetre-tena tsy misy tahak’izany ry havana.
Ny hafatra ho antsika avy amin’izany ry havana dia ny mba ananantsika Fitiavana ny namantsika koa amin’izao fankalazana ny nahaterahan’i Jesoa Kristy izao.
Didy lehibe ry havana ny fifankatiavana ary i Jesoa Kristy dia tsy nitsahatra namerimberina izany tamin’ireo mpianany dia ny mba hifankatiavan’izy ireo.
Fotoana izao ry havana hanatanterahantsika izany fifankatiavana izany amin’ny mpiara-belona amitsika.
Ny ntaolo aza ry havana dia efa niteny hoe: aleo very tsikalakalam-bola toy izay very tsikalakalam-pihavanana.
Jereo anie ao @ I Petera 3: “8 Farany, miraisa saina hianareo rehetra, ka miaraha ory, mifankatiava tahaka ny mpirahalahy, mifamindrà fo, manetre tena,”
Mety hoy ianareo hoe tena sarotra izany nefa tadidio ry havana izao Soratra Masina izao, mbola ao @ I Petera ihany toko 4: “8 Ary mihoatra noho ny zavatra rehetra, mifankatiava tsara; fa "ny fitiavana manarona fahotana maro" (Oha. 10 .12).
Romana 13: “10 Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana; koa dia ny fitiavana no fahatanterahana ny lalàna.”
Raha izany ary dia tena zava-dehibe tokoa ny Fitiavana satria tena manova ny fiainana ho tena tsara sady mahavonjy.
Koa ny hafatra ho antsika voalohany dia mifankatiava tsara. Mitadiava fihavanana amin’ny olombelona rehetra .
Tsy maninona na dia ianao aza no manantona voalohany mitady fihavanana.
Ny Tompo anie ry havana no nanatona voalohany antsika e! fa tsy isika e! Izy no efa tia antsika taloha.
Mampianatra antsika hanetry tena koa izany satria raha tsy eo ny fanetre-tena tsy tsy afaka hihavana amin’ny hafa isika.
Ny fanetre-tena dia mahatonga antsika mifandray amin’ny olona rehetra tsy misy fanavakavahana na tombotsoa.
2 Ny zavatra nentin’i Jesoa Kristy teto an-tany
Raha ny voalazan’ity Soratra Masina ity no lazaina ry havana dia ireto no voasoratra ao: fahasoavana sy fahamarinana, ilay tokana mahita an’i Ray ary manambara ny momba an’i Ray amintsika.
Ny fahasoavana sy ny fahamarinana izay nentin’i Jesoa Kristy ho antsika ry havana dia nampiova ny fianantsika satria nahitantsika famonjena avy Aminy izany.
Fa ny fahasoavan’Andrimanitra no mahatoy izao antsika, nahazoantsika famonjena.
Fahasoavana sy fahamarinana i Jesoa kristy ry havana satria dia Andrimanitra tonga lafatra Izy , feno ny hatsarana rehetra, izay tsy takatry ny saintsika ny famaritana azy.
Ka io fahasoavana sy fahamarinana io no manjohy antsika isan’andro eo amin’ny fiainantsika mba ahafantarantsika fa momba antsika i jesoa Kristy Tompontsika.
Iainantsika isan’andro io fahasoavany sy fahamarinany io.
I Jesoa Kristy no hany tokana mahita ny Ray satria Zanak’Andrimanitra Izy. Ary tsy notazoniny ho Azy irery izany fa dia tonga tety an-tany koa Izy mba hampahafantatra antsika ny Ray.
Matio 11: „27 Ny zavatra rehetra natolotry ny Raiko Ahy; ary tsy misy mahalala tsara ny Zanaka, afa-tsy ny Ray; ary tsy misy mahalala tsara ny Ray, afa-tsy ny Zanaka sy izay tian'ny Zanaka hanehoana Azy.”
Ary eo @ and faha 18 amin’ity Jaona 1: „18 Tsy nisy nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana; fa ny Zanakalahy Tokana, Izay ao an-tratran'ny Ray, Izy no nanambara Azy.”
Jaona 10: „30 Izaho sy ny Ray dia iray ihany.”
Ataoko fa mazava tsara ry Havana izay andian-tsoratra Masina rehetra izany fa I Jesoa Kristy dia Zank’Andrimanitra lahitokana tokoa ary mazava ho azy fa Andrimanitra Izy izany.
Ny dikan’izany ry Havana dia tsy misy afaka hanome antsika fahasoavana sy fahamarinana afa tsy Jesoa Kristy izay lahitokan’Andrimanitra irery ihany.
Tsy ahita izany isika na amin’iza na amin’iza. Mandainga izay sahy milaza fa afaka manome antsika izany fahasoavana sy fahamarinana izany.
Andrimanitra ilahany tokana tena tsara indrindra no afaka manome izany antsika.
Iza moa ry havana no afaka mampahafantatra antsika an’i Ray raha tsy efa tena manana ny fahalalana tsara Azy.
Misy manana fahalalana ny Ray mihoatra ny Zanaka ve ry havana? Tsia, tsy misy izany.
Izany no tena iraka nataon’i Jesoa tety an-tany dia ny hampahafantatra antsika an’Andriamanitra Raintsika.
Izy Tompo mihitsy no nilaza fa raha mahafantatra an’i Jesoa Kristy isika dia mahafantatra ny Ray ihany koa.
Koa izao ary ny hafatra ho antsika: fantaro aloha i Jesoa Kristy fa tsy marina izany hoe mahafantatra an’i Ray ianao nefa tsy mahalala an’i Jesoa Kristy akory.
Tadidio fa i Jesoa Kristy dia efa niteny fa Izy no lalana sy fiainana ary fahamarinana, tsy misy mankany amin’ny Ray afa tsy amin’ny alalany.
Koa ahoana no fomba ieritreretanao ny fiainana mandrakizay tsy misy an’i Jesoa Kristy.
Manatona Azy ry havana fa Izy dia tsy mba mandà izay manatona Azy.
Raiso ho Tomponao sy Mpamonjy anao Izy ary aoka Izy ihany no mandidy sy manapaka ny fiainanao.
Ary farany, manatona azy amin’ny fo madio tsy misy pentipentina satria Andrimanitra dia tsy tia ny ratsy, mibebaha ry havana ka mialà amin’ny ratsy fanao fa mbola tsy tara akory ianao raha mbola nomen’Andirmanitra tombon’andro.
Izany ry havana no tena fanomezana tsara indrindra omenao an’i Jesoa Kristy amin’izao fankalazana ny nahatongavany tety an-tany izao dian y fanoloranao tena ho Azy.
Raha averina indray ireo hafatra voalaza ireo dia izao:
- mifankatiava tsara
- mba mahaiza manetry tena
- fantaro tsara i Jesoa Kristy
- raisonao ho Tompona sy Mpamonjy anao Izy
- mibebaha ary mial&a